သန်းရွှေ-သိန်းစိန်-မင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ ဗမာစစ်တပ်ဟာ အရှုံးပိုဆိုးလာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စစ်သားတွေက သူများထက်ထူးပြီး ဘာကြောင့် အပိုအခွင့်အရေးတွေ ယူနေတာလဲ
ရဟန်း သံဃာ အဖြစ် မခံယူမှီ မင်းခ ယောင်္ကျား အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ရမယ် »
သန်းရွှေ-သိန်းစိန်-မင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ ဗမာစစ်တပ်ဟာ အရှုံးပိုဆိုးလာ
အရှုံးကို သီးစုံထောပတ်ထမင်းနဲ့ဖုံးတဲ့ မင်းအောင်လှိုင် (အောင်သဇင်)
April 20, 2015 at 3:29pm
ဗမာပြည်က ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ အများဆုံးကစားကြတဲ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲတွေမှာ အရှုံးအနိုင်ကို လဲရှုံး ကွဲရှုံး ကြောက်ရှုံး လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြရာက အနောက်တိုင်းလက်ဝှေ့နည်းစနစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါ အမှတ်ရှုံးဆိုပြီး တမျိုး တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အခု ဗမာပြည် အရှေ့မြောက်ဖျားမှာ ဗမာစစ်တပ်နဲ့ MNDAA ကိုးကန့်တပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်နေခဲ့တာ ၂ လကျော်ပြီဖြစ် တယ်။ ဒါဟာ သံလွင်အရှေ့ခြမ်းကိုးကန့်နယ်က တိုက်ပွဲကိုဘဲ ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး တကယ်တော့ MNDAA ဟာ သံလွင် အနောက်ခြမ်း ကွတ်ခိုင် မူဆယ် မုံးပေါ် မုံးကိုးနယ်တွေမှာ KIA TNLA AA SSA တို့နဲ့တွဲပြီး တိုက်နေခဲ့တာ တနှစ် လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ စစ်အေးကာလအဖြစ်ပြောရရင်တော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကတိဖျက် အလစ်အငိုက်တိုက် ခံရပြီးနောက် ၂၀၁၃ အထိ မြေအောက်သျှိုး ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ခြေလျင်ခြေမြန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မတွေ၊ အမြောက်တပ်မ သံချပ်ကာတပ်မတွေ၊ ခေတ်မီနောက်ဆုံးပေါ် တိုက်လေယာဉ် တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ် ဂျီပီအက်စ်လမ်းညွှန်စနစ် ကွန်ပျုတာထိန်းချုပ်စနစ်တွေ ရေဒါစနစ်တွေသုံးပြီး တောင်ကုန်းတွေကို အဆမတန်အင်အားနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားတဲ့ ခေတ်မီလက်နက်တွေကို ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ပထမဆုံး လက်တွေ့အသုံးချတာဖြစ်တယ်။ ဒါတောင် အရာရှိစစ်သည် ၆၀၀ ကျော်ကျဆုံးရပြီး ၈၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ရတယ်။ အကျအဆုံးများနေလို့ ရှေ့ တန်းတိုက်ပွဲဝင် အရာရှိစစ်သည်တွေ စိတ်ဓာတ်မကျအောင် မီဒီယာ၊ Facebook တွေကနေ ကက(ပြည်) နဲ့ နောက်ထိုင်/အငြိမ်းစား အရာရှိ တွေကိုယ်တိုင်အားပေးနေကြရတယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးနဲ့ ထိပ်ပိုင်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပြင် သမတ-လွှတ်တော် နာယကတွေ ကစလို့ စစ်ဆေးရုံတွေမှာ အသည်းအသန် လိုက်လံအားပေးနေရတယ်။ ပြည်တွင်းနဲ့ စစ်တပ်အတွင်းမှာ ပြည်ပကျူးကျော်စစ် ဆိုပြီး ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်ထားသေးတယ်။
MNDAA အဖို့ လက်ရှိကာလဟာ ပျောက်ကျားစစ်ကာလဖြစ်ပြီး အခြေခံဒေသဟာလဲ လွတ်မြောက်ဒေသ မဖြစ်သေး တဲ့ ပျောက်ကျားဒေသသာဖြစ်လို့ မဆုတ်တမ်းခံစစ်စခန်းတွေမထားဘဲ ရန်သူ့သက်ရှိအင်အားချေမှုန်းရေးကိုသာ အဓိကထားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခုတ်ထန်စခန်းတွေဟာ ပန်မာကောက်၊ မော်ဖာ ပွိုင့် ၁၈၃၇၊ ခွေးအိပ် တောင်၊ နော်တ၊ ဝါးခ(ကော်မူးရာ)၊ ဖလူးတို့လို ခံစစ်သေစခန်းတွေမဟုတ်ဘဲ ယာယီစခန်းတွေဘဲဖြစ်တယ်။ လောက်ကိုင်-ချင်းရွှေဟော် ကားလမ်းကို ချုပ်ကိုင်ရာမှာ တစုံတရာအထောက်အကူရလို့ ထိုင်ထားတဲ့ စခန်းတွေသာ ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကို ချုပ်ကြည့်ရင် သံချပ်ကား ၂ စီး RPG ထိပြီး ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ တပ်မ ၆၆ က ၁၂၈ ယောက်သေ၊ ၂၇၈ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ ကချင်စစ်မြေပြင်ကပြန်လာပြီး ရက် ၂၀ ပြည့်အောင် မနားလိုက်ရဘဲ စစ်ဆင်ရေးပြန်ထွက်ရတဲ့ တပ်မ ၆၆ ဟာ အထိအနာဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လောက်ကိုင်အရှေ့ခြမ်း စစ်နယ်ဝှန်း ကို ဦးစီးတဲ့ စကခ-၁၆ တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်နေဝင်းအောင်ကို တပ်မ ၆၆ တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစောမင်းက တော်တော် အစာမကျေဖြစ်နေတယ်။ စစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ တက်ထားတဲ့ တပ်မ ၃၃ ကလဲ ၈၂ ယောက်သေ၊ ၂၁၄ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ စကခ ၁ နဲ့ စကခ ၁၆ အထိအခိုက်စာရင်းကိုတော့ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ရဲ့ ရန်သူ့သက်ရှိ အင်အားချေမှုန်းရေး ရည်မှန်းချက် ကောင်းကောင်းအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်က ကုန်းကြမ်းဘက် မှာ တိုက်ပွဲတပွဲထဲ ဗမာစစ်တပ် ခမရ ၅၂၂ က ၃၉ ယောက်ကျခဲ့တယ်လို့လဲ ဗမာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဝန်ခံလာရတယ်။)
This entry was posted on April 21, 2015 at 1:48 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.